ရွာသူားများအတွက် လက်ဆောင်-သက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊မြန်မာ့လူနေမှုဘ၀ကိုပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ရွာသူားများအတွက် လက်ဆောင်-သက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊မြန်မာ့လူနေမှုဘ၀ကိုပြင်
Posted by padonmar on Feb 18, 2014 in Editor's Choice, Health & Fitness, My Dear Diary | 24 comments
14.1.2014 ဓမ္မဗျူဟာတွင် ကျင်းပသော
Dr.ခင်နွယ်ဝင်း (USA) ၏
ကင်ဆာ+ဆီးချို+သွေးတိုး နာတာရှည်ရောဂါများ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်
(၁) ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဓာတ်တိုးခြင်း(=သံချေးတက်ခြင်း=Oxidation) မဖြစ်အောင်နေရမည်။ကင်ဆာဆဲလ်များသည် အက်ဆစ်ဓာတ်နှင့် အချိုဓာတ်တွင် ပိုပွားနိုင်သဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အက်ဆစ်ဓာတ် မဖြစ်အောင် နေရမည်။အချိုရှောင်ရမည်။
(၂) ခုခံအားကောင်းအောင် အစားအသောက် ၊ အနေအထိုင် ပြုပြင်ရမည်။
(၃) အကျိုးဝေဒနာကို ကုဖို့ထက်အကြောင်းရင်းကို ရှာကုရမည်။
(၄) အဆိပ်အတောက်များ၏ ပေါင်းခြင်း (အဆိပ် ၁+၁+၁+၁) သည် အဆိပ် ၄ မကပဲ အဆိပ် ၄၀ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
(၅) မည်သည့်အချိန်မဆို ပြုပြင်လျှင် နောက်မကျသေးပါ။ အချိန်မီပါသေးသည်။
(၆) အသက်ရှည်ခြင်း၏ သော့ချက်သည် အစားနည်းခြင်း၊ချင့်ချိန်စားခြင်း ဖြစ်သည်။
(၇) အစားအသောက်သည် အခြေခံကြမ်းခင်းနှင့်တူ၍ Vitamin နှင့် Supplements များသည် အမိုးအကာနှင့်တူသည်။ အားလုံး လုံပါမှ ပတ်ဝန်းကျင်မှ air pollution,water pollution,carcinogen စသော အဆိပ်အတောက်များ၏ဒဏ်ကို ခံနိုင်မည်။
(၁) ကွမ်းယာဝါးခြင်းရှောင်ပါ။ (ခံတွင်းကင်ဆာ ၊ လျှာကင်ဆာ ၊ သွားဖုံးရောဂါ ၊ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါမှတဆင့် ဦးနှောက်ယောင် ၊ နှလုံးရောဂါထိဖြစ်နိုင်သည်။)
(၂) အစားအသောက်ပူပူများကို ပလပ်စတစ်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နှင့်ထည့်ခြင်းရှောင်ပါ။(ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်)
(၃) လက်ဖက်ရွက်အရင့် (Black Tea) ဖြင့် ပြုလုပ်သော လက်ဖက်အကြမ်းခြောက် ၊ အချိုခြောက်များရှောင်ပါ။(အရွက်ရင့်သည် မြေထဲမှ အဆိပ်ဓာတ်များကို စုပ်ယူထားသောကြောင့်)
လက်ဖက်ခြောက်ကို Green Tea (မနုမရင့်) သို့မဟုတ် White Tea (အနု) ကိုသာသုံးရန်။
(၄) လက်ဖက်ရည်ချိုပူပူကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲထည့်လျှင်
Black Tea + အချို + ဆိုးဆေး + အလူမီနီယမ်ဘူးဖြင့် ထည့်ထားသော နို့ဆီတို့သည် အဆိပ်အတောက်များဖြစ်၍ ဆတိုး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။
(၅) Ready Made ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များရှောင်ပါ။ (သုံးပြီးဆီ ၊ အချိုမှုန့်များ သုံးထားတတ်သောကြောင့်)
အထူးသဖြင့် ဆီချေးစော်နံလျှင် Oxidized ဖြစ်ထားပြီဖြစ်သောကြောင့် လုံးဝမစားပါနှင့်။
(၆) ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဗူးကို နေပူပူထဲမထားရ။ ပူနေသောကားထဲမှ ရေသန့်ဗူးရေကို ပြန် မသောက်သင့်တော့ပါ။(ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်)ဖန်ပုလင်းဖြင့်သာ ရေထည့်သောက်ပါ။
(၇) Preserved Food ( ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားသောအစာ) များကိုရှောင်ပါ။
(၈) ဝက်အူချောင်းစားခြင်းရှောင်ပါ။ (၀က်အူချောင်းလုပ်ရာတွင် သုံးသော ယမ်းစိမ်း = Nitrate သည်သွေးကင်ဆာ Leukemia ဖြစ်စေနိုင်သည်။)
(၉) M.S.G = Natural Flavouring = Hydrolized Protein = အချိုမှုန့် အတူတူဖြစ်ပါသည်။
အစားအသောက်များတွင် အချိုမှုန့်အမည်ကွဲအမျိုးမျိုး သုံးထားတတ်သည်။ ယင်းအမည်များပါလျှင် ရှောင်ပါ။
(၁၀) Coffeemix များ သောက်ခြင်းရှောင်ပါ။
(၁၁) အချိုစာ ၊ ထမင်း ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ လျှော့စားပါ။
(၁၂) Cholesterol lowering agents ကိုလက်စတီရောချသော ဆေးများ အလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။ (Cholesterol 120 mg/dl အောက် မချပါနှင့်။ ဦးနှောက်၏ ၆၀% သည် ကိုလက်စတီရောများ ဖြစ်သည်၊ကိုလက်စတီရော ထုတ်လုပ်မှု ပိတ်လျှင် CoQ10မထုတ်နိုင်သောကြောင့် Heart Failure ဖြစ်နိုင်သည်၊Alzeimer’s disease ဖြစ်နိုင်သည်၊ခန္ဓာကိုယ်တွက် အရေးကြီးသော ဟော်မုန်းများလည်း မထုတ်နိုင်ပါ။) ဆီးချိုထိန်းဆေး၊သွေးတိုးကျဆေး၊အတက်ရောဂါထိန်းဆေး(Anti convulsants) တို့ကို မဖြစ်မနေသောက်ရန် လိုအပ်လျှင် Co Q10 နှင့် တွဲသောက်ပါ။
(၁၃) ငရုပ်မှို ၊ မြေပဲမှိုများသည် အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ရေဆေးခြင်း ၊ ဆီပူထိုးခြင်းဖြင့် ပျောက်မသွားနိုင် သောကြောင့် မှိုတက်သောအစာဆိုလျှင် လုံးဝမစားပါနှင့်။
(၁၄) ရင်သားဓာတ်မှန် Mammogram ရိုက်တိုင်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ခြေ 1-3% တိုးပါသည်။ Radiation Hazard ရှိ၍ မလိုအပ်ပဲ မကြာခဏ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ရှောင်ပါ။ (မိသားစုထဲတွင် ကင်ဆာရှိ၍ မကြာခဏ စစ်ဆေးရန်လိုလျှင် Anti-Oxidants များ ကြိုတင်သောက်ထားရန်လိုပါသည်။)
(၁၅) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး Vaccine များသည် Mercury နှင့် Aluminium များပါပြီး ၄င်းတို့ကို ဦးနှောက်တွင် သိုလှောင် ထားသဖြင့် Alzeimer’s disease (သတိမေ့ရောဂါ)ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မထိုးသင့်ပါ။
(၁) ဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံ ဖျော်ရည် နေ့စဉ်တဖန်ခွက်သောက်ပါ။(ဖျော်နည်း နောက်တွင်ကြည့်ပါ)
(၂) ပုံမှန်အစာစားသည်ထက် ပိုဝလာခြင်း ၊ ဗိုက်ပူခြင်း ၊ မျက်နှာဖောင်းခြင်း ၊ အသားအရေခြောက်ခြင်း ၊ ဝဲနှင်းခူ Psoriasis ၊ သမင်ဖြူ Vitiligo ၊ တင်းတိပ် ၊ ဝက်ခြံ များဖြစ်ခြင်း ၊ အမြဲချမ်းနေတတ်ခြင်းတို့သည် Hypothyroid ၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ (နံနက်အိပ်ရာထလျှင် အပူချိန်ကြည့်ပါက 97.8ံF ထက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် လျော့နေတတ်ပါသည်။) Cholesterol တက်နေ တတ်သည်။ ထိုသို့ခံစားရလျှင် Free T3 , T4 , TSH စစ်ကြည့်ပါ။ Reference ဖြစ်သော 0.45 -4.5 miu/ml အတွင်းဖြစ်သော်လည်း ထင်ရှားသော ရောဂါလက္ခဏာ ၂ခုထက်ပိုလျှင် သွေးအဖြေကို လူနာအခြေအနေနှင့်တိုက်ကြည့်ပြီးမှ ရောဂါရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ လိုအပ်လျှင် Thyroid Hormone ဆေးသောက်ရပါမည်။
(၃) ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊ ကြွက်တက်ခြင်း ၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း ၊ အကြောတက်ခြင်း ၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း ၊ နှလုံးရုတ်တရက် ရပ်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊အသားအရေ ခြောက်ခြင်း၊ခြေဖ၀ါးလက်ဖ၀ါးများ အက်ကွဲခြင်း ပျောက်ကင်းစေရန် ၊အသားအရေ နူးညံ့စေရန် Magnesium Maleate (or) Citrate သောက်ပါ။ (သို့) ဆားခါး Magnesium Sulphate2cups= (500cc) =(အချိုပန်းကန် ၂ ခွက်) နှင့် Baking Soda စားဆော်ဒါ ½ cup (125 cc) ကို ရေချိုးကြွေကန် Bath Tub(သို့) ရေအပြည့် ဇလုံ တွင်ဖျော်၍ စိမ်ချိုးပေးပါ။ (သို့) အချိုးကျဖျော်၍ ခြေထောက်စိမ်ပေးပါ။
(၄) ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ဝမ်းမချုပ်စေရန်၊ ကြွက်မတက်ရန် ၊ ကလေးဉာဏ်ကောင်းစေရန် ၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်မတက်စေရန် အတွက်လည်း Magnesium Maleate (or) Magnesium Citrate 600 – 900 mg/day သောက်ပေးရပါမည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးများသူများ အညောင်းထိုင်သူများလည်း သောက်သင့်ပါသည်။
(၅) ညအိပ်ရာမဝင်မီ သွားကြားများကို သန့်ရှင်း ၊ သွားတိုက်ပြီးလျှင် စားဆော်ဒါ ¼ tsp( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ¼) ခန့်ကို ရေဖျော်၍ ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ အနည်းငယ်သောက်နိုင်သည်။ (ခန္ဓာကိုယ်ကို alkaline ဖြစ်စေ၍ ကင်ဆာကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် gas ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် အစာမရှိလျှင် မသောက်ရ။)
(၆) ဆီးကျောက်တည်ခြင်းကင်းရန် ရေများများသောက်ပါ။
(၇) နေ့စဉ် ချွေးထွက်အောင် လှုပ်ရှားကစားပေးပါ။ (ကျောက်ကပ်မှ အဆိပ်စွန့်ထုတ်ရမှုသက်သာစေသည်။)
(၈) ကြက်ဥစားပေးပါ။(ဥအနှစ်လိမ္မော်ရောင် ဆိုလျှင် ပိုကောင်းပါသည်)
(၉) Vit D3 နည်းလျှင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သဖြင့် နေ့စဉ် Vit D3 5000 IU သောက်လျှင် ရင်သားကင်ဆာ ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ နေရောင်မှလည်း ရနိုင်သည်။ နွားနို့မှရသော Vitamin သည် D3 မဟုတ်ပါ။
(၁၀) နနွင်းမှုန့်စစ်စစ် ¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း+သံလွင်ဆီ နှင့်ဖျော်သောက်ပါ။ (ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သည်။) သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကျနိုင်သဖြင့် အစာစားပြီးမှသောက်ပါ။
(၁၁)ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ရန် သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ½ နေ့စဉ်သောက်ပါ။
(၁၂) ရင်သားကင်ဆာ ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာများ ဖြစ်စေတတ်သည့် ဖလူရွိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ရန် အိုင်အိုဒင်းပါသော ကျောက်ပွင့်စားပါ။
(၁၃) ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ကာကွယ်ရန် အူလမ်းကြောင်းထဲရှိ ကောင်းသောပိုးများကို အားပေးသော ဒိန်ချဉ် (သကြားမပါ) သောက်ပါ။
(၁၄) နေ့စဉ်သောက်ရန် အားဆေးများ
(1) Vitamin C (Magnesium ascorbate or calcium ascorbate) 1000 mg (Ascorbic acid မဟုတ်ပါ)
(2) Vitamin E 400 IU
(3) Co Q10 100 mg
(4) R-Lipoic Acid 100 mg
(5) B12 5000 mcg + B6 100 mg + Folate 800 mg
(6) Omega3/ Fish Oil (ဝယ်လျှင် Ingredients ၌ သတိထားဖတ်ရန်၊E.P.A = 200 mg ထက်မများရ။D.H.A =500 mg အနည်းဆုံးပါရမည်။ )
၁။ Anti-Oxidant အစုံရအောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းစိမ်းကြမ်းကြမ်းများကို အရည်ကြိတ်၍ သောက်ရန်။
	ကိုက်လန် ၊ ဟင်းနုနွယ် ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ရဲယိုရွက် ၊ မယ်ဇလီရွက် ၊ သင်္ဘောရွက် ၊ ကန်ဇွန်းရွက် ၊ မုန်ညင်း ၊ မြင်းခွာရွက် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ။(နှစ်သက်ရာ)
	တရုတ်နံနံ(သွေးတိုးရောဂါတွက် ကောင်းသည်) ။
	ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ) ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်(ခရမ်းရောင်) ။(ကင်ဆာကာကွယ်သည်)
	သောက်ကောင်းရန် ပန်းသီး၊သံပုရာသီးစသည့် မချိုလွန်းသော အသီးများထည့်နိုင်ပါသည်။
ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရသွားတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အရွယ်က ခေါင်းလောင်းတီးနေပါပြီ
– စားကို မစားတာ။
– လက်ဖက်ရည်က တစ်နေ့နေလို့ တစ်ခါ မသောက်ဖြစ်၊ ရံဖန်ရံခါမှသာ
(၆) ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဗူးကို နေပူပူထဲမထားရ။ ပူနေသောကားထဲမှ ရေသန့်ဗူးရေကို မသောက်သင့်။(ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်)ဖန်ပုလင်းဖြင့်သာ ရေထည့်သောက်ပါ။
– မကြိုက်၍ မစားဖြစ်
-မစားတာ အနှစ် ၃၀ ရှိပါပေါ့။ ဆိုင်မှာတော့ စားဖြစ်ရင် ရှောင်မရသေးး;
– အဲ။ အဟီးဟီးးးး။ ဖြတ်မရသေးးးး
(၁၂) Cholesterol lowering agents ကိုလက်စတီရောချသော ဆေးများ အလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။ (Cholesterol 120 mg/dl အောက် မချပါနှင့်။ ဦးနှောက်၏ ၆၀% သည် ကိုလက်စတီရောများ ဖြစ်သည်၊ကိုလက်စတီရောမရှိလျှင် CoQ10မထုတ်နိုင်သောကြောင့် Heart Failure ဖြစ်နိုင်သည်၊Alzeimer’s disease ဖြစ်နိုင်သည်၊ခန္ဓာကိုယ်တွက် အရေးကြီးသော ဟော်မုန်းများလည်း မထုတ်နိုင်ပါ။) ဆီးချိုထိန်းဆေး၊သွေးတိုးကျဆေး၊အတက်ရောဂါထိန်းဆေး(Anti convulsants) တို့ကို မဖြစ်မနေသောက်ရန် လိုအပ်လျှင် Co Q10 နှင့် တွဲသောက်ပါ။
– ဒီဟာမှာ လာညိနေပြီ။ ဆင်ခြင်ပါ့မယ်။
– ဘဝမှာ ဓာတ်မှန် တစ်ခါလားပဲ ရိုက်ဖူးတယ်။
– အနော် အရမ်းမေ့တတ်တာတော့ ဒါနဲ့ မဆိုင်လောက်ဘူးးး ဟီးဟီး
ရှောင်ရန်တွေကို ရှောင်ဖို့ အရင် ကြည့်သွားတယ် အာတီဒုံ။
– ဟိ။ မသောက်ဖြစ်။ ဈေးကြီးတယ်။
– ငင်။ မျက်နှာဖောင်းတာ ဒါ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဖျားဖျားးးး
– ဘာမှ မရှိ
-သောက်မယ် သောက်မယ်။ (နောက်ဆုံး အချက်ကြောင့်မို့နော်။)
– လိုက်နာပါ့မယ်။ သွားတိုက်ရုံရော ရဘူးလားးး;
– ရေသောက်တော့ နည်းသဗျ။
– ဟိ။ ဒါလည်း ရှားပါးးးးးးးး
– တစ်ပတ်မှ ၂ လုံးလောက်ပဲစားဖြစ်တယ်
– ဟုတ်။ လိုက်နာပါ့မယ်။
– ဆနွင်းနဲ့ပျားရည်လုံးထားတာတော့ သောက်ဖြစ်တယ်။
– အဲဒါ ရုံးမှာလည်းပြောနေကြတယ်။ လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်
– ကျောက်ပွင့်က အဖြူလားဟင်??
– ၁ နဲ့ ၅ ပဲ သတိရရင်သောက်တယ်။
ဆားခါးနဲ့ စားဆော်ဒါ စိမ်ပြီးရေချိုးရင် အသားအရေနူးညံ့ပြီး ပေါင်တင်ခြင်းတမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့။စမ်းကြည့်ပါလား။
အိုင်အိုဒင်းပါတဲ့ ကျောက်ပွင့်က ပင်လယ်ထဲကရတဲ့ အညိုရောင်မျိုးပါ။သုပ်စားလို့ရတယ်လေ။
သွားတိုက်ရင် စားဆော်ဒါလေးငုံတာက လုပ်နိုင်မှလုပ်ပေါ့ကွယ်။
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ထူးချွန်သူတွေမြင်တော့ သူတို့လို ကြိုးစားမယ်
နောက်တော့ ဒုံရင်း ဒုံရင်း ပြန်ဖြစ်တယ်
အခုလဲ ဖတ်ပြီး သဘောတွေကျ အဲဒီ အတိုင်း လိုက်လုပ်မယ်
ဘယ်တော့ ဒုံရင်း ပြန်ဖြစ်မယ် မသိ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို ကျန်းမာစေချင်တဲ့ အန်တီလေး ရဲ့ စေတနာကတော့
လေးစား အားကျရင်း နဲ့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်
အခုထက် ပိုချော ပိုကျန်းမာပါစေ
( မတောင်းလဲ ပြည့်နေသူမို့ ဆုတောင်းပေးရတာတောင် သိပ်အားမရဘူးရယ် )
မမမာရေ.. ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို မှတ်သားသွားပါတယ်
“လက်ဖက်ရွက်အရင့် (Black Tea) ဖြင့် ပြုလုပ်သော လက်ဖက်အကြမ်းခြောက် ၊ အချိုခြောက်များရှောင်ပါ။(အရွက်ရင့်သည် မြေထဲမှ အဆိပ်ဓာတ်များကို စုပ်ယူထားသောကြောင့်)”
(၁) ကွမ်းယာ …. နိုးပါ
(၂) အစားအသောက်ပူပူ + ပလပ်စတစ်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်… ဟင့်အင်း
(၃) လက်ဖက်ရွက်အရင့် (Black Tea)… ဒါလည်း မကြိုက်လို့ နိုးပါ
(၄) လက်ဖက်ရည်ချိုပူပူ + ကြွပ်ကြွပ်အိတ်… ဖြေပြီး
*** လက်ဖက်ရည်ဆို ကျဆိမ့်ပဲသောက်တယ်
(၅) Ready Made ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်… အဲဒါတော့ ကြုံရင်စားတယ်
(၆) ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဗူး + နေပူပူ… မသောက်တတ်ပါ
(၇) Preserved Food (၈) ဝက်အူချောင်း (၁၀) Coffeemix
*** ဟမ်… အဲဒါပဲစားနေရတာ တေပါပြီ
(၉) M.S.G … လုံးဝ မစားပါ
(၁၁) အချိုစာ ၊ ထမင်း ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ… အားဟင့် အဟာရပြတ်ဘီ
(၁၂) Cholesterol lowering agents … ဟိ သောက်ကို မသောက်ဘူး
(၁၃) ငရုပ်မှို ၊ မြေပဲမှို … ချားဘူး
(၁၄) ရင်သားဓာတ်မှန်… ရှိမှမရှိတာ… အာဟိ
(၁၅) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး… အသားနာမှာကြောက်လို့ မထိုးပါ
ကွမ်းယာကတော့ လုံးဝမစား :buu:
အစားအသောက်ပူပူ + ပလက်စတစ် ကြွတ်ကြွတ်အိတ် ရံဖန်ရံခါ
Ready Made ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် မစားဖြစ်တာ နှစ်အတန်ကြာ
ပလပ်စတစ် ရေသန့်ဗူး + နေပူပူ မသောက်ပါ ရေကျက်အေးသာ သောက်သည်။
Preserved Foods ဝက်အူချောင်း Coffeemix အဲဒါတွေနဲ့လဲ သိပ်မလွတ်ပါ စကားအတင်းစပ် Birdy ကရော Coffeemix စာရင်းထဲပါရားညင် :mrgeen:
အချိုစာ ထမင်း ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ…….ဒါလည်း မလွတ်နိုင်သေး :harr:
Cholesterol Lowering Agents……နွေရာသီမှာ သောက်မိတာများတယ်
ငရုပ်မှို၊ မြေပဲမှို စားကိုမစားတာ
တုပ်ကွေးအားဆေး ငှက်ဖျားတောင် အမြတ်ပြတ်ခဲ့သေးတာ တုပ်ကွေးလောက်တော့ ဝေလာဝေး
(၁) ကွမ်းယာ— စားဘူးရယ်
(၂) အစားအသောက်ပူပူ + ပလပ်စတစ်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်—- အဲဒါဘိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေဆဲ။ ချိုင့်ဆွဲဆွဲသွားနေရတယ်။
(၃) လက်ဖက်ရွက်အရင့် (Black Tea)—လုံးဝမသောက်ပါ
(၄) လက်ဖက်ရည်ချိုပူပူ + ကြွပ်ကြွပ်အိတ်— ဆိုင်မှာပဲသောက်တယ်။ ကျဆိမ့်
(၅) Ready Made ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်—ရံဖန်ရံခါစားမိတယ်။ မစားပဲလဲမနေနိုင်ဖြစ်နေတယ်။
(၆) ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဗူး + နေပူပူ— အေးမှပဲသောက်တာမို့ နိုးပလုံပလုံ
(၇) Preserved Food နဲ့ (၈) ဝက်အူချောင်း—- ရံဖန်ရံခါစားမိတယ်။ လုံးဝမရှောင်နိုင်သေး
(၁၀) Coffeemix— လုံးဝမသောက်ပါ
(၉) M.S.G— လုံးဝ မစားပါ
(၁၁) အချိုစာ ၊ ထမင်း ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ— အချိုမစား ထမင်းစား
(၁၂) Cholesterol lowering agents— ချစ်ချစ်သောက်နေဒယ်။ ပြောအုံးမှ
(၁၃) ငရုပ်မှို ၊ မြေပဲမှို— လုံးဝမစားပါ။
(၁၄) ရင်သားဓာတ်မှန်— ရိုက်ဖူးဘူးရယ်။
(၁၅) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး—ထိုးဘူး။ တုတ်ကွေးမှဆေးသောက်တယ်
မွသဲ ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ရေသန့်ဘူး+ နေပူပူ ကို စာနည်းနည်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲမှာစိုးလို့ပါ.
နေပူမိထားတဲ့ ရေသန့်ဘူးအသစ်(သို့)ပြန်ဖြည့်ရေ ကို အေးသွားရင် ပြန်သောက်လို့ရတယ်ထင်မှာစိုးလို့ပါ။
ရေသန့်ဘူးလုပ်တဲ့ ပလပ်စတစ်က အပူနဲ့ဆို ကာစီနိုဂျင်တွေ ထွက်လာပြီး ရေထဲရောက်သွားတယ်လို့ မှတ်ပါနော်။လုံးဝမသောက်ပါနဲ့တော့။ကားထဲမှာ ဖန်ပုလင်း(သို့)သံဗူးနဲ့ပဲ ရေဆောင်သွားတာ စိတ်ချရပါတယ်။
ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ မျှဝေပေးတဲ့ အမွှာညီအမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ ပြန်မပြောတတ် မပြောနိုင်တော့ မိတ်ဆွေတွေကို အခွေလက်ဆင့်ကမ်းပြီး နားထောင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
(၁) ကွမ်းယာဝါးခြင်း – အဲဒါကတော့ လုံးဝပဲ။
(၂) အစားအသောက်ပူပူများကို ပလပ်စတစ်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နှင့်ထည့်ခြင်း – ဒါက ရှားပါအိ။
(၃) လက်ဖက်ရွက်အရင့် (Black Tea) ဖြင့် ပြုလုပ်သော လက်ဖက်အကြမ်းခြောက် ၊ အချိုခြောက်များ – ဟီးးး ရွှေဖီမိုးလွတ်ပဲ သောက်တယ်။ အဲ့ဒါ လွတ်လားဟင်
(၄) လက်ဖက်ရည်ချိုပူပူကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲထည့်လျှင် – ဒါကတော့ အိမ်ကိုပြောရမယ်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မသောက်။
(၅) Ready Made ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များရှောင်ပါ – ဘိုင်ပြတ်နေလို့ မစားနိုင်တာ လေးလကျော်ပြီလားမသိ….
(၆) ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဗူးကို နေပူပူထဲမထားရ။ ပူနေသောကားထဲမှ ရေသန့်ဗူးရေကို မသောက်သင့်။ – ရှောင်ထားပါသည်။
(၇) Preserved Food ( ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားသောအစာ) များကိုရှောင်ပါ။ – ဒါလဲ သိပ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးရယ်
(၈) ဝက်အူချောင်းစားခြင်းရှောင်ပါ။ – အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခု ပြုတ်လေပြီ……..
(၉) M.S.G = Natural Flavouring = Hydrolized Protein = အချိုမှုန့် အတူတူဖြစ်ပါသည်။ – အနည်းငယ်…
(၁၀) Coffeemix များ သောက်ခြင်းရှောင်ပါ။ – တစ်ရက်ကို တစ်ထုပ်….
(၁၁) အချိုစာ ၊ ထမင်း ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ လျှော့စားပါ။ – ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။
(၁၂) Cholesterol lowering agents ကိုလက်စတီရောချသော ဆေးများ အလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။ – ဒါက လွတ်တယ်။
(၁၃) ငရုပ်မှို ၊ မြေပဲမှိုများ – ဒါလဲ လွတ်သေးတယ်.
(၁၄) ရင်သားဓာတ်မှန် – ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်ပါ၏
(၁၅) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး Vaccine များ – ဘာမှန်းတောင် သိဘူးရယ်….
အဲ့လောက်ဆို အဆင်ပြေမလား ဒေါ်လေး…
ဖားသဂျုိးလေးရဲ့ ရွှေဖီမိုးလွတ်က လက်ဖက်ခြောက် အညွန့်လေးတွေ ဆိုရင် တော့ သောက်သင့်ပါတယ်။
my fb မှာ notes လုပ်ပီး share လိုက်ပိနော်…
credit လည်း ပေးထားရယ်…
သာမီးက ကဖီမစ် နဲ့ ခေါက်ဆွဲထုပ်ဒွေ သိပ်ကြိုက်ဒါ… ဗြဲ
တေပါပီ …ေိခိ
အခုပို့စ်ရဲ့ စာသားတွေကို ဖောင့်ပြောင်း၊ စာလုံးအရွယ်အစားချဲ့ပြီး အရွက် ၂၀ ထုတ်ထားတယ် အန်တီမာ။ အသိအကျွမ်းနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကို ဝေဖို့ပါ။
ရေသန့်ဘူး+နေပူပူ မှာ နားလည်မှုလွဲမှာစိုးလို့ စာသားနည်းနည်းပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ကိုလက်စတီရောချတဲ့ဆေးတွေမှာလည်း မမဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ အကြံပေးချက်အရ စာနည်းနည်းပြင်ထားပါတယ်။
အပြင်လူတွက် သိပ်မထူးခြားပေမယ့် ပညာရှင်များတွက် ထောက်ပြစရာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
သာမာန်လူများစုတွက် လိုက်နာသင့်တာ ရှောင်ရမှာတွေတော့ အရင်စာနဲ့လည်းရပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ဆရာမကြီး တီတီဒုံ..များစွာအကျိုးရှိပြီး ဗဟုသုတများတိုးပွါးစေပါ၏
ထို့ကြောင့်လည်း ဤနေရာကို မန်းဂေဇက်ဟုခေါ်တွင်စေပါ၏…
ဖတ်ရှု အားပေးကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို အားနာပါတယ်။မအားလို့ အခုမှပဲ မေးထားတာလေးတွေ အကြောင်းပြန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုနို ပေးတဲ့ ဆုတောင်းတွက် လည်းကျေးကျေးပါလို့။
ထုံးစံအတိုင်း.. သတင်းစာထဲပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့.. ယူပါရစေခင်ဗျ..
ဘာလိုလိုနဲ့.. ဆရာမပဒုမ္မာလည်း.. ကျမ်းမာရေးပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်နေပြီ..
ကြုံလို့ပြောရရင်.. သတင်းစာရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်တွေထဲ.. အခုသမ္မတနားရောက်နေတဲ့သူတွေ.. အကြံပေးတွေ..ဖြစ်ပြီးပေါ်မလာတွေဖြစ်ကုန်ရော..။
ခုတလောတင်.. ပုံမှန်Op-Ed ရေးပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဆို.. စုဖေါင်ဒေးရှင်းထောင်တဲ့အထဲ.. ချဲယားဝူးမန်င်းဖြစ်နေသဗျ..။ :buu:
ဒီစာက မမဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း(မူရင်း)ကောင်းလို့ မိတ္တူကောင်းတာပါ။
ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆေးကုတတ်တဲ့ ဆရာဝန်လို့ မထင်ရဲတော့လို့ ကျန်းမာရေးအကြောင်း ကျယ်ကျယ် မပြောရဲပါဘူး။
စုဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ဒေါ်မီမီဝင်းကိုတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ (အရည်အချင်းရှိတဲ့ မြန်မာတွေ မြန်မာပြည်တွက် လုပ်ပေးခွင့်ရလို့)
ဒီတိုင်းဆို ကျမတို့ ရွာသူတွေ ကေဇီတို့၊ဆူး+ဝေေ၀တို့၊သဲနုအေးတို့လည်း သမ္မတ အကြံပေး မဖြစ်ဘူးလို့ အဘယ်သူပြောနိုင်ပါအံ့နည်း ။
သင်္ကြန်ရက် လူကြုံ ရှိတယ်။သူကြီး ဒီတခါ သတင်းစာပို့သွားရင် အရင် လိပ်စာကို ပို့ပေးထားပါလား။နီးနီးလေးပဲ။
ကေဇီ့တွက် ပေးချင်လည်း ထည့်ပေးပါ။ရန်ကုန်ကနေ ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။
ပြောရရင်.. ဆရာမခင်မမမျိုးလည်း.. ရန်ကုန်သတင်းတွေမှာမကြာမကြာတွေ့တတ်တယ်..။
နောက် ၁လကျရင် ဖွဘုတ်ထဲမှာ (၁)နဲ့(၂) ပေါင်းပြီး လိုရင်းထုတ်ထားတာရှိတယ်။အဲဒါကို ထပ်ထည့်လိုက်။